Milina fandavahana vera, milina fanenomana endrika vera, milina fanamoriana fasika - SUNKON
HAMORIANA VOAFITRA HO AN'NY SAKAFY
mamorona sanda ho an'ny vera
SUNKON Intelligent Technology Co., Ltd., dia miorina ao Guangdong, Shina, izay nahatratra 10000 metatra toradroa. Hatramin'ny nananganana ny taona 2012, dia nifikitra tamin'ny filozofia famokarana "mivelona amin'ny kalitao ary amin'ny lazan'ny olona". Ampitomboy tsy tapaka ny R&D development.and famolavolana masinina be mpampiasa kokoa amin'ny filan'ny tsena. Manana fitaovana famokarana be pitsiny, fitaovana fanaraha-maso tsara kalitao, famolavolana matanjaka sy famokarana izahay.
Masinina avo roa heny CGSZ2042 Glass
Masinina fandavahana fitaratra CGZK480
CGZ9325P Glass mahitsy miolakolaka Edging Machine wit ...
CGZ9325P-45 ° Machine miova miova amin'ny vera miaraka ...
CGX371SJ Glass Mahitsy Line Beveling Machine W ...
CGX261P Glass Mahitsy Line Beveling Machine w ...
Masinina fanasan-damba CGQX 2500
Masinina Sandblasting Auto-Glass CGPS-1600
Ny orinasanay dia manokana amin'ny famokarana milina fanodinana vera. Ohatra: Machine Straight Edging Line, Machine Straight Glass Beveling Machine, Glass Straight Line Edging Machine, Glass Straight Line Round Edging Machine, Glass Machine Fanasana, Glass Sandblasting Machine sns. Manana fitaovana famokarana be pitsiny, fitaovana fanaraha-maso tsara kalitao , famolavolana matanjaka sy famokarana. Izahay dia manome kalitao "zero".
Backgrond teknika matanjaka, vokatra feno ary traikefa manankarena. mihoatra ny 10 taona
Ekipa mpanara-maso kalitao henjana, manamarina amin'ny ambaratonga rehetra hanomezana vokatra ho an'ny mpanjifa avo lenta ny mpanjifa
rafitra fitantanana tonga lafatra sy rafi-serivisy aorian'ny varotra dia miantoka serivisy ara-potoana sy mahomby ho an'ny mpanjifa
Fampirantiana ao Malezia
Fivarotana fivarotana Sunkon 2021
Sunkon dia nanao fihaonambe momba ny asa fivarotana 2021 tao amin'ny foiben'ny orinasa tamin'ny 2 martsa 2021. Nanatrika ny fivoriana ny mpitarika ny orinasa sy ny mpitantana ny faritra. Amin'ity fivoriana fivarotana ity dia namintina ny asan'ny marketing tamin'ny taona 2020 izahay, ary nanao ny drafi-pandraharahana momba ny asa marketing sy ny fanalahidy ...
Momba ny fihevitry ny vera fitaratra, dia nantsoina koa hoe Liuli tany Sina taloha. Ny tarehin-tsoratra sinoa japoney dia solontenan'ny vera. Izy io dia singa mafy orina mangarahara izay mamorona rafitra tambajotra mitohy rehefa miempo. Mandritra ny fampangatsiahana dia miadana tsikelikely ny viscosity ...